Thenga ithikithi kusikhathi esidijithali inikeza akukho nobunzima. Kodwa ngezinye izikhathi kufanele sibhekane nesimo lapho akwenzeki ukukwenza ngesikhathi esisodwa. Bese kufanele sinqume ukuthi lo mbuzo: "? Indlela ukubhuka ithikithi lendiza" Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi isihambi ayinayo imali eyanele ukukhokhela ithikithi ngokushesha. Kulokhu, akusiyo ezingaphezu kuka kuyoba ukwazi ukuthi ukubhuka ithikithi ngaphandle kokukhokha.
Kwezinye izimo, kungase kudingeke ukuba ukubhuka?
Online yokubhuka kwamathikithi emoyeni kungadingeka kulezi zimo ezilandelayo:
Kunengozi hhayi ukuthola i-visa. Ezinye uthi ke kwenqatshiwe. Ngakho-ke, kusengaphambili ukuze ukwazi ukuthenga amathikithi lapho okwamanje avunyelwe lo mbuzo okuyingozi kakhulu.
I izivakashi kukhona imali enganele. Kwenzeka ukuthi imali engakasithathi isinyathelo umthethosivivinywa uhambe bese tariff esilungele air travel futhi intengo ithikithi isivele ezaziwayo. Kulokhu, asesebenzisa ukubhuka. Ukuthengwa senziwa kamuva.
ngezinye izikhathi sidinga kokwethula ithikithi kolunye uhlangothi ukuthola i-visa. Kwenzeka ukuthi izivakashi ngeke ubuye esikhathini esizayo, noma engafuni fly emuva ngendlela efanayo. Ngokwesibonelo, e-Thailand ngaphandle ithikithi ukubuya ukundiza akunakwenzeka - nje musa wobulawa umgibeli ngendiza. Uma kubalulekile visa kungaba inyatheliswe futhi ukugcwalisa iphepha amakhophi zempi yakho.
Ukuze sithole ama-visa
Ziningi abanesifiso sokwazi: "kanjani ukubhuka ithikithi lendiza visa?" Ngokuvamile ohlwini kwemibhalo edingekayo ukuze sithole ama-visa (isib Schengen) iyadingeka ukuze unamathisele imibhalo mayelana amahhotela yokubhuka kanye amathikithi emoyeni. Uma zokuhamba kungukuthi kuchazwa, kulesi simo, ukukhokhela indiza kuphela visa abizayo futhi akusizi ngalutho. Lapho bewela umngcele namanye amazwe adinga kokwethula ithikithi ukubuya. Njengoba ojwayelekile, kufanele kube nje ithikithi lendiza! Uhambo olude ukuthenga idokhumenti travel kuphela isethulo ngayinye walo ezingenangqondo. Phuma - ukubhuka amathikithi benethuba yokukhokha ayilibalanga.
Kuphi futhi kanjani ukubhuka ithikithi lendiza ngaphandle kokukhokha?
Isayithi air abathwali. Airlines njalo ukunikeza ukubhuka ngaphandle kokukhokha intela, ukuhlela izivakashi izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokuhamba. Ngokwesibonelo, isiJalimane yezindiza Lufthansa anganikeza phefu inkokhelo ukuze izinsukwana, inkampani American United - ngeviki. Emirates, isiKorea Airlines, Hong Kong Airlines - izinsuku ezingu-10. Kodwa yokukhansela Lufthansa sika ukubhuka okuqinisekisiwe kungakhanselwa ozoba kubutsela ukuthi yezindiza ibhalisiwe ngaphansi. Kwakubalulekile ukuba uqaphele ukuthi uma izivakashi unesithakazelo ngempela kokuthenga ithikithi, inkokhelo kumelwe kwenziwe kusenesikhathi, njengoba yenethiwekhi kungenzeka nganoma isiphi isikhathi ukukhansela ukubhuka.
Ama-ejensi ithikithi. Ama-ejensi ethandwa kakhulu lapho ungenza amathikithi inthanethi-yokubhuka ngaphandle kokukhokha, kukhona Euroavia Agent.ru. Kumele kukhunjulwe ukuthi akunakwenzeka ukusho ukuthi bangaki izobamba isabelo sakho. Lokhu ixhomeke isikhathi esisele ngaphambi kokuba indiza Ukuhamba isithakazelo isihambi. Uma uzama ukubhuka ithikithi izinsuku 3 ubuwula ukulindela ukuthi nibambelele ezimfundisweni out esingaphezu kosuku. Uma indiza agodliwe, izinyanga 3, bese yendiza Cishe izophathwa ngokukhulu esiphezulu futhi izogcina ubuqotho bakho ngoba yisikhathi ngokwanele eside.
Ngingayithola kanjani ukuqinisekisa ukubhuka kwami?
Uma kudingekile, ungakwazi Ukuphrinta ikhophi yephepha ke. Ngakho kubalulekile ukuba lusebenzise amasevisi ekhethekile, yakhelwe ukuhlola izindiza agodliwe. Ukuhlonza zempi kulawa masayithi yethula ikhodi enezinombolo ezingu-6 PNR yokubhuka negama umgibeli sika ngesiLatini. Ngakho-ke kuqinisekisiwe isimo namanje zempi engakhokhiwe, futhi abasebenzi lenxusa ngeke ukubuza imibuzo eminingi kakhulu.
Indlela ibibhukelwe ithikithi plane?
Ngemva lokubhuka indiza futhi inkokhelo ebekiwe e-mail (e-mail) ifika irisidi uhambo (futhi ibizwa nangokuthi i-e-ithikithi, t. E. E-ithikithi). Ukuze bathole ithikithi iphepha, irisidi kumelwe benyathelisa futhi khona edilini lomshado we indiza esikhumulweni sezindiza.
On umthetho Federal № 314-FZ
Ngo-December 2007, uMongameli Russian V. Putinym ngemvume zoMthetho Federal № 314-FZ, okuyinto wamemezela ukuthi imibhalo, ezisetshenziswa ukuhlinzekwa kwezinsizakalo ukuze kungene umoya umgibeli zokuthutha (kungaba ithikithi, imithwalo isheke noma okunye okunjalo.) Ingabe itholakala ngekhompyutha. Njengoba zonke izindiza Russian kwethulwa isimiso E-Ticket.
Iklayenti izindiza (umgibeli) kuyakhethwa futhi kukhokhelwe i ndiza etholakalayo.
izihlalo Airline ibibhukelwe, futhi ikhasimende uthunyelwa i irisidi uhambo, t. E. E-ithikithi.
Iklayenti kunyatheliswa, futhi ngosuku sokuhamba kufanele kube khona edilini lomshado ngesikhathi indiza.
yezindiza opharetha bangenile ngokumelene ipasipoti iklayenti idatha kanye nolwazi e-ithikithi, bese wakhipha ithikithi iphepha.
Ngemva esitholile, abagibeli Ungabeka off imithwalo yakho futhi uqhubekele zone buluhlaza khona, lapho ukulawula amasiko. Lapha waphinda ukuzohlola uqhathanise imibhalo yabo idatha ku ithikithi iphepha.
Ngemva amasiko umgibeli kufanele uqhubekele endaweni ukulinda, lapho emva isikhangiso indiza uzoqala boarding. Phakathi kokwehla bayophinde edingekayo ukwethula ithikithi iphepha.
Ngemva kokuhlola yemvume yokugibela umgibeli wabuya, futhi kungenzeka ukuba aqhubekele umkhumbi.
Zonke abafuna oda amathikithi endiza inthanethi, kufanele wazi ukuthi ngempela kudingeka phezu yokubhalisa:
izindiza yasekhaya: WaseRussia, isakhamuzi passport yangaphakathi nge irisidi uhambo (e-ithikithi);
izindiza zangaphandle: iphasiphothi (evumelekile) nge irisidi uhambo (e-ithikithi).
Indlela ukubuyisela ithikithi?
Ngakwazi ukubhuka amathikithi endiza-inthanethi, futhi manje kufanele ubuyele kuzo? Khona-ke kufanele wazi ukuthi ngokuvamile uhambo phezu iklayenti e-mail sithumela imininingwane ejenti, indiza yokubhuka. Kuyadingeka ukuthola umenzeli kanye ithintane naye maduzane.
Mayelana nenqubo yokubhuka yezindiza
Izivakashi ukubuza imibuzo mayelana nendlela ukubhuka ithikithi lendiza inthanethi, khumbula lokhu okulandelayo:
Ticket - an international maphilisi inothi. Ngakho-ke, ulwazi ukubhuka yayo futhi ukudayiswa (incazelo indiza, idatha yomuntu siqu of umgibeli, indiza amakhodi, imithetho yokugibela, njll ..) Ingabe etholakala ngesiNgisi.
Idatha yomuntu siqu abagibeli ezingaba kumele kuhambisane labo abalotshwe iphepha lakhe. Ngokusho imithetho le-International Association of zenethiwekhi ngokubhala amagama igama umgibeli avunyelwe hhayi ningi than amaphutha ezintathu. Kulokhu, kufanele kube ilungelo uhlamvu lokuqala nesibongo.
Labo abathanda indlela ukubhuka ithikithi lendiza umoya travel nge ushintsho, kumele unake la maphuzu alandelayo:
nenani ubuncane uxhumano isikhathi: ngezinye izikhathi ezikhumulweni zezindiza ezinkulu, lapho okusezingeni eliphezulu umgibeli lomgwaqo, alanele ukufakelwa;
kuze kube seqophelweni ukudluliswa udinga zidlule ukulawula iphasiphothi;
kufanele acacise isidingo ukudluliswa wemithwalo iphuzu ngenkathi kuhanjwa izindiza ezahlukene;
opharetha noma yendiza udinga ukucacisa ulwazi mayelana noshintsho sezindiza kwaze kwaba seqophelweni ukudluliswa, ibanga zezindiza, indlela ukuhambisa phakathi kwawo isikhathi sosuku ukuthi inquma sezimoto emigwaqweni; Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukucabangela isidingo ukuthola i-visa yokuba sendleleni;
kanye ithikithi yokubhuka, njengoba sekuphawuliwe, umgibeli uthola isaziso ku-imeyili yakho, esisho inombolo yokubhuka, yonke imininingwane ithikithi kwendiza eside yokukhokha;
ngemva yokuqinisekisa etholwe opharetha inkokhelo, ekhelini esifanayo kukhona irisidi e-ithikithi;
amathikithi endiza ibibhukelwe ku okufanayo noma umi eceleni usuku, kanye nalabo lapho amagama efanayo futhi amagama abagibeli kanye nemizila angaphansi yokukhansela ngokuzenzekelayo yendiza, kungakhathaliseki noma cha inkokhelo yenziwe, ngakho uma uke ukubhuka ezifanayo eyenziwe ejensi noma izingosi ze-Internet ezahlukene, kubalulekile ukukhansela impinda noma kunesidingo ukwazisa opharetha.
On Izichibiyelo kanye ukwesulwa
Wabathanda kanjani ukubhuka ithikithi lendiza, kufanele wazi ukuthi:
kuze kufike isikhathi lapho umgibeli asizange sivele lokukhokha, kanye ithikithi engathengiswanga out, kungenzeka izinguquko ukubhukelwa noma ukwesulwa ithikithi ngaphandle amashaji angeziwe;
ukuthengiswa amathikithi yezindiza is imisebenzi amakamelo ngesikhathi abakhwabanisi izindiza ezithile; amathikithi ikhodi ifakwa phansi ngemva kokuba inkokhelo uzoya bangakunaki opharetha;
ku agodliwe noma kakade ithengiswe ithikithi ayikwazi ukushintshwa amagama kanye namagama abagibeli ngaphansi kwanoma iziphi izimo - kungenzeka ukuba afeze kuphela ngokukhansela futhi ithikithi entsha e nokuba khona izihlalo indiza;
sicabangela iphutha yokubhuka ithikithi, isidingo ukushintsha noma ukukhansela kumele azise u-opharetha.
Indlela sokukhokhela ithikithi?
Ukukhokhela amathikithi by izindlela ezilandelayo:
ngezikhathi zokusebenza zebhizinisi ehhovisi lika-opharetha;
kunoma iyiphi i-EFT wire (abantu ngabanye), kusukela ekulandiseni inkampani (izinhlangano ezingokomthetho), kanye ukuze kugwenywe ukungaqondi kahle ezihlobene ukunyakaza kwezimali emkhatsini amabhange, izinkokhelo ezenziwe kufanele kubikwe opharetha ngocingo / ifeksi noma i-imeyili ;
ungakwazi ukukhokha nge-credit card ehhovisi ka-opharetha (ukwamukela Visa, i-American Express, MASTERCARD), kuyilapho ithikithi sengezwe izindleko zokukhokha izindleko zasebhange.
Izindleko ithikithi emoyeni
izindiza Traditional okuqinisekisiwe zendiza ukuba 23:59 nesikhathi sendawo. Lapho kuqala ngosuku olulandelayo kungashintsha (ukwanda noma ukuncipha), njengoba ngaphambi kokudayiswa esiphathiswa ithikithi unelungelo ukushintsha imigomo. ithikithi izindleko zingahluka ngokuya kokushintshashintsha kwamanani okuhwebelana. Uma inkokhelo kuhlelwe ngosuku lokubhuka ukuba sigweme noma yikuphi ukungaqondi kahle ngaphambi imali ukudluliswa, kumele uhlole opharetha izindleko langempela le ithikithi.
ithikithi Order "Aeroflot"
"Aeroflot" kuyinto yezindiza Russia anothile, le-International Air Transport Association. Le nkampani iye ukusebenza emakethe futhi ingenye ngobukhulu kuleli zwe. Isekelwe ku Sheremetyevo, inkonzo salo kungaphansi inqwaba izindiza ezifuywayo international. It has ezingeni lelisetulu enikezwa abagibeli.
Ukuze oda amathikithi, lokhu akusho ukuthi isicelo wasebhange sezindiza. Lokhu kungenziwa inthanethi noma ngocingo. Labo abathanda indlela ukubhuka ithikithi lendiza "Aeroflot" linikeza imiyalelo enemininingwane.
Okokuqala, udinga ukuvakashela isayithi ye "Aeroflot" futhi ukutadisha isheduli izindiza. Ukwenza lula ukucinga izihlungi sethule uhlelo elula. Kufanele ufake emkhakheni ezifanele ezokufika isikhathi, usuku Ukuhamba nosuku ukubuya. Ngemva kwalokho, thina nje uchofoze "Thola." Ngemva kwesikhashana, ukunakwa ikhasimende bazonikezwa uhlu zonke izindiza on isiqondiso esiqondile futhi usuku oluthile.
Khetha kwendiza yokugibela
Okulandelayo, ngokuchofoza okukodwa, u- "Thenga ithikithi," kufanele uye ekhasini lokuthenga. Lapha Umenyiwe ubheke inqubo iyala amathikithi. Uma imithetho zicacile abagibeli ezingaba, angababaza wafaka umugqa ohambelana isheke bese kwesokunxele kuya ugcwalise inkambu (kokuhamba, ukufika, usuku, nesikhathi sokuhamba, inani amathikithi ngaphambilini, ikilasi sevisi). Ngemva kwalokho, okukodwa ibizwa ngokuthi uhlu izindiza kanye tariff ekhethiwe.
Ngaphambi kokuba bathuthe ekhasini elilandelayo, ukuhlola izinkambu kuphelile! Ozokwamukelwa lapho amaphutha iyala kungaba yizindleko ezinkulu. Lapho ukulethwa ithikithi kuyodingeka bakhokhe inhlawulo, ukubhala idokhumenti entsha travel. Esimeni amaphutha oda kufanele ukhansele ngokushesha ngocingo.
Flight idokhumende siqu. Ngakho-ke, lapho bahambisa oda ikhasimende idinga ukwenza idatha nameplate. Flight ngaphakathi Russia kusho ukwethulwa njalo ipasipoti idatha phesheya adinga ukungena idatha ye passport. Ligama nesibongo ebhaliwe zesi-Latin ebhokisini.
Thenga amathikithi "Aeroflot" kungaba ngezindlela ezihlukahlukene: ngekhadi lesikweletu inthanethi, nge-QIWI noma umfanekiso inkampani. Indlela yokukhokha kumele icacise kusayithi. irisidi uhambo kuza ngemva kokuba inkokhelo nge-imeyili.
mayelana umehluko wemisindo nemiqondo yamagama
Ungakwazi oda amathikithi "Aeroflot" ocingweni, ithikithi ehhovisi inthanethi noma isevisi ekhethekile inthanethi.
Ukubhuka Airline Kunenkolelo emini. Uma iklayenti phakathi nalesi sikhathi akazange ukukhokhela oda, ithikithi uzobe ithengiselwa omunye.
Lapho wayala amathikithi ekilasini umnotfo kumele uqaphele ukuthi ukuze ngiphinde ngibabone noma sokushintshela kwelinye akukwazi ngaphandle eside ukulahlekelwa ngokwezimali. Ngenxa yalesi sigaba kwemibhalo "Aeroflot" ukulinganiselwa abalulekile anikezwa.
Lokhu yezindiza usebenza okuhleliwe kanye charter izindiza abiza. Okokuqala nge cheapness zawo ezilinganiselwe kuhluke babefike ngesikhathi esingesihle of ezokufika. Le ndiza, i ukukhokhelwa eyengeziwe ngoba umthwalo nokudla. Nezimvume akuzona njalo inzuzo. emizileni yabo zimane ezweni lonke, ujabulela ukwanda phakathi baseRussia. Ngaphezu kwalokho, izihlalo ezingcono kunezinye kuvame ibibhukelwe ngu tour opharetha.
I "Aeroflot" ngezinye izikhathi zinikeza izaphulelo ezingenziwanga kabanzi ikhangiswe. Betholakala khona, landela izindaba lenkampani. Ukuba khona amathikithi eshibhe, sicela ushayele.
Uma izindiza of "Aeroflot" ukubhuka ngendlela eyodwa, ngamaholide, impelasonto, kuyoba ezibizayo.
Labo abazi kanjani ukubhuka ithikithi lendiza ocingweni, kufanele uyakhumbula ukuthi kubalulekile ukuzama ukubiza idatha iphasipoti, usuku ukuhamba, kanye neminye imininingwane njengoba ngokucacile ngangokunokwenzeka. Kungenjalo, musa ukuba bagweme amaphutha lapho iyala.
Izifo angaphuzi okwezithelo zomvini, nezindlela zokugwema.